Iminyaka yokugcina emhlabeni wezemfashini ukulangazelela konke okusele kwemvelo nemvelo. Ukotini, isilikhi, ama-knitwear avela ngentambo yemvelo ngokuzithemba yithatha indawo yabo ekuqoqweni kwabadwebi abahamba phambili, futhi isongo esenziwe ngamatshe futhi singene ngokuphelele esigabeni kumele sibe nayo. Lokhu kusho ukuthi okungenani umhlobiso owodwa kufanele ube ngowesifazane ohloniphayo. Iyiphi uhlobo lokufinyelela, indlela yokuyikhetha nokuyigqoka?
Kuyini lobu buhle?
Incazelo yegama elithi "isongo" ngesiLatini lisho "ingaphambili". Umhlobiso wenziwa ngendlela yezindandatho, intambo noma uchungechunge bese ugoqa ingalo, umlenze noma intamo.
Lo mhlobiso ungomunye wasendulo kunazo zonke emhlabeni. Ukubhoboza kwezandla, izinyawo zemilenze nezinye izingxenye zomzimba nabesifazane, namadoda ahlotshiswe namasongo kusukela esikhathini esidlule. Lapho evule amadolobha amadala, izindawo zokuhlala noma izindawo zokungcwaba, abavubukuli bahlale bebona ubufakazi balokhu. Isongo esenziwe ngamatshe, izindlovu zendlovu, izinkuni, insimbi eyigugu noma ithusi ... Imfashini yashintsha, kodwa kubonakala sengathi lo mhlobiso ube njalo.
Namuhla, ekuphakameni kokuthandwa, amasongo avela ngamatshe. Izithombe zezinhlobonhlobo nezokuziwayo, ezihlotshiswe izesekeli eziyigugu, amaphepha agcwalisiwe omagazini bezemfashini nezincwadi ze-intanethi. Gqoka amabhontshisi ngezintambo ezincane noma izintambo ezigcwele, ngakwesandla esisodwa futhi ngokushesha kokubili, emagqatsheni nasezinsikeni. Ngokuvamile, umgomo oyinhloko - kufanele ube mnandi futhi omuhle.
Ngaphandle kokubukeka kwayo okukhangayo, amaminerali wemvelo nawo anempahla yokuphulukisa futhi anikeze ekubuyiseleni noma ekuthuthukiseni inhlalakahle yomnikazi wabo. Abantu abanolwazi bayaphikisana nokuthi isongo esenziwe ngamatshe linomthwalo wamandla nezinye izinto zemilingo, ngakho-ke kungaletha inhlanhla noma, ngokuphambene nalokho, kubhubhise zonke iziqalo, ngakho-ke kufanelekile ukukhetha kuphela uma uhlomile ngolwazi.
Ngaphambi kokuthenga ubucwebe obufisayo, udinga ukuqonda ukuthi kungani lokhu kwenziwa ngokusemthethweni.
Uma kuphela ubuhle, khona-ke kwanele ukunquma ukuthi isiphi isongo esitokisini esifanele uphawu lwesayensi yezinkanyezi, khetha imodeli oyithandayo kanye nesisombululo esifanele sombala. Futhi yilokho konke! Ungakhanyisa!
Uma kukhona isifiso noma isidingo sokusebenzisa izipho zikaMama Nature ngesimo sokuphulukisa noma amandla amakhulu amaminerali emvelo, kuyadingeka ukuthi ufunde lolu daba ngokuningiliziwe.
Nasi isibonelo sezinto zamatshe amaningana ajwayelekile kakhulu:
I-Aquamarine iyanciphisa ukuphazamiseka kwemizwa, ivuselele ukululameka kwezifo zenhliziyo, igqugquzela umsebenzi wokudala nowengqondo, iqinisa ubuhlobo;
I-Garnet inikeza amandla, ihlinzeka isimo ngokuvuvukala nokukhuphuka komzimba womzimba, inezimfanelo zethando lomthandi, inika abantu amandla ngisho nokubikezela ikusasa;
I-Sardonyx ithatha isifo se-thyroid, izifo zamathunjini, ikhuthaza ukuphola okusheshayo emahlathini, ithuthukisa isimo sengqondo futhi ivikele esweni elibi;
I-Agate izokwelapha inhliziyo nemaphaphu, ithuthukise isimiso somzimba sokuzivikela, sivikele ukucindezeleka futhi sisize ukuxazulula impikiswano;
I-Chrysolite izosindisa ekuthungeni nasebusweni obunzima, gcina kusuka ezenzweni zokuhlaselwa ngezingozi ezinkulu;
I-Alexandrite isiza ngezifo zegazi nesistimu yokujikeleza, ivikela ekuguleni, inika impilo ende, ibonisa uthando nokuthembeka.
Ukuze ungenzi iphutha ngokuzikhethela, kungcono ukuxhumana nomthengisi noma, uma kungenzeka, ngomuntu owazi kahle kule ndaba.
Ngokuhlukile, kufanelekile ukunaka isongo esivela ku- biansha yamatshe. Amazwana ososayensi, abamele imithi yendabuko, odokotela kanye nabaphilisa ngezindlela ezihlukahlukene ezivela emhlabeni wonke ukumangala nokumangaza. Leli tshe ligxiliwe kuphela endaweni eyodwa emhlabeni, eChina. Izigidi eziningi zeminyaka edlule, i-meteorite yawela kuwo, okwaba ngumthombo walesi sihloko esingavamile.
Itshe elimnyama, elimnyama, elibushelelezi ekuthintaneni namanzi ashisayo liba lubi futhi linemikhiqizo ngqo yemilingo. Uhlu lwezinkomba zokugqoka izinto ezifana nalokhu lukhulu: izinqubo zokuvuvukala, umdlavuza, izinkinga zesimiso sokuzivikela omzimba, ukwedlula ngokweqile, ubuhlungu, ukukhathala, ukucindezeleka nokuningi okuningi. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva indoda ephethe isikhumba sayo isongo somnyama omnyama ibheka encane futhi izwa inempilo futhi ijabule kakhulu!
Ungathenga izesekeli zemfashini namuhla ezitolo eziningi namasiloni, kanye ne-intanethi. Into esemqoka akumele ukhohlwe ukubuza umthengisi ngezincwadi eziqinisekisa ubuqiniso bamaminerali. Ngeshwa, ama-fake amaningi athengiswa ukuthi abukeka enesizotha, kodwa angenazo zonke izinto ezingenhla. Futhi akuwona wonke umuntu okwazi ukuhlukanisa itshe lokufakelwa kusuka emvelo "ngeso".
Ukwenziwe ngesandla - into yokuzilibazisa enhle
Omunye umkhuba wesimo samanje - amasongo avela ngamatshe ngezandla zawo. Ukuthenga ngalesi sifundo konke okudingayo kulula.
Enye yezindlela ezilula. Ngomsebenzi uzodinga: amatshe wefomu elidingekile, izintambo, izinsimbi zokugqoka, imihlobiso yezinwele, "ama-huggers" noma "abanikazi", ama-bail, ama-rondels namasongo okuxhuma. Ukusebenzisa umbusi ojwayelekile, ubude obudingekayo bomcibisholo bulinganiswa, bese zonke izakhi zifakiwe. I-oda lithembele kuphela emcabangweni nasekunambeni kwenkosi. Intambo inconywa ukuthi isebenzise abicah ngoba inamandla futhi isonwe. Amahora ambalwa omsebenzi nomhlobiso usulungile!
Kunezinye izindlela, ezinye zazo ezizodinga isikhathi esiningi, ikhono kanye nekhono. Amakilasi e-Master kulesi sihloko abhalwe kabanzi kwi-intanethi, ngakho-ke isifiso sokwenza ubucwebe ngokwakho sinokwenzeka ngokuphelele.
Enjabulweni yabathandekayo bakho!
Phakathi kwezinye izinto, Amasongo avela ngamatshe ngezandla zawo siqu - lo mqondo omuhle ngesipho. Ehle, engabizi, ewusizo futhi, okubaluleke kakhulu, ngomphefumulo! Ukuqoqa kahle amatshe bese uchitha isikhathi esincane sokwenza, ungaletha injabulo enkulu kumama, udade noma intombi. Phela, ukuqonda kanye nokuzwa komuntu ukuthi kwenziwa ngokwayo ngemicabango ngakho sekubaluleke kakhulu. Futhi uma kuphinde kuthuthukise impilo, njengokuthi, isongo esenziwe ngetshe le-bianshi ... Ukubuyekezwa kanye nezinkumbulo zabathandekayo ngesipho esinjalo kuyoba okufudumele kakhulu futhi kumnandi kakhulu!
Imbilapho: anatomy, izifo kunokwenzeka nokwelashwa kwazo. hernia inguinal